Qalabka dhicitaanka ee Apple Watch wuxuu badbaadiyaa nolosha suuxdinta | Wararka IPhone
Baadhitaanka dayrta ee Apple Watch wuxuu caawiyaa badbaadinta nolosha suuxdinta.
Toni Cortés | | Apple Watch, dhowr
Apple Watch waxay badbaadisaa nolosha isticmaale cusub markale. Waxaana jira kuwo horeba u jiray. Kate Donald, waxaa ku dhacay suuxdin daran markii ay kaligeed guriga joogtay. Dhulka ayuu ku dhacay isagoon awoodin inuu fadhiisto, suuxdin ayaa ku habsatay, iyo qalabka dayrta ee uu ku kiciyey barnaamijkiisa degdegga ah ee Apple Watch.
Dhaqaatiirta ayaa Kate u sharaxay in mid ka mid ah sababaha suuxdinta ay tahay hurdo la'aan. Galab galab ah, seygeeda ayaa kaxeystay seddexdooda caruur ah waxayna ka tageen gurigooda si Kate si fudud ugu nasato. Kahor Marwo Donald wuu seexan doonaa, waxaa ku dhacay qalal daran oo sababay inay dhulka ku dhacdo. Nasiib wanaag, waxaan haystay Apple Watch oo leh nidaamka ogaanshaha dayrta oo firfircoon. Saacaddu waxay si toos ah u ogeysiisay Xaaladda Degdegga ah ee SOS iyo ninkeeda.
Kate waxay sharraxday inay iibsatay Apple Watch sanad ka hor markay uurka lahayd oo ay la kulantay suuxdin joogto ah:
«Ogaanshaha taas Apple Watch Baadhitaanka dayrta ayaa la hirgaliyay, kama aanan labalaabanin inaan iibsado, maadaama markii aan uurka lahaa suuxdin fara badan oo soo noqnoqotay, oo waxaan ku dhici jiray laba ilaa saddexdii marba. Markii aan ku dhacay dhulka iyo gariir, ayaan awoodi waayey inaan saacadda taabto. Nasiib wanaagse Apple Watch ayaa ku wargalisay ninkayga Ben, oo wuxuu isla markiiba wacay deriskeyga oo si deg deg ah u soo galay gurigeyga oo iga helay weerar buuxa. Si dhakhso ah ayaa loogu yeedhay ambalaas, oo waxay u sheegeen inuu durbaba waddada socdo, ilaa waxay heleen digniinta Apple Watch«.
Ogaanshaha dayrta ayaa laga hirgaliyay Apple Watch Series 4 sanadkii hore. Haddii saacaddu ogaato dhibic daran, miiska hal daqiiqo ayaa la hawlgelinayaa. Haddii aan dhaqdhaqaaq la ogaan daqiiqadaas gudaheeda, wac adeegyada gurmadka ee gobolkaaga, una dir SMS fariimahaaga xaaladaha degdegga ah, oo ay ku jiraan meesha aad hadda ku sugan tahay.
Heer ahaan, ogaanshaha dayrta ayaa naafo u ah dadka da'doodu ka yar tahay 65 sano. Waxay muhiim u tahay dhalinyarada halista ugu jirta dhicitaanka si ay u hawl geliyaan shaqadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Baadhitaanka dayrta ee Apple Watch wuxuu caawiyaa badbaadinta nolosha suuxdinta.
Caqli badan !! Waa maxay guacho wanaagsan!
Ku jawaab Hernancito